Despite many tipping Jah Prayzah to top the 2017 Radio Zimbabwe Coca-Cola Top 50 thanks to his popular latest album Kutonga Kwaro, the sponsors of the prestigious annual chart have hinted that the music star [...]
The Unity Accord of 1987 is posing serious headaches for President Emmerson Mnangagwa who gave himself two days to handpick his two deputies, the Daily News on Sunday can report. This comes amid indications that [...]
Controversial dancer Beverly “Bev” Sibanda on Thursday walked away with R50 000 and a trophy after beating 20 other dancers from several African countries at the Africa Storm Dancehall Queen hosted by Baseline Club in [...]
Former president Robert Mugabe’s shadow hung over the Zanu PF’s extra-ordinary congress in the capital on Friday as officials mistakenly chanted praises in his name, although they expelled him. The 37 years of chanting “pamberi [...]
More than a month after a section of the homestead belonging to Johane Masowe Vadzidzi Vajesu Church founder Aaron Mhukuta Gomo was vandalised, government is still to investigate the incident. Mashonaland Central Provincial Affairs ministers [...]
The campaign to instil a presidential adulation in Zimbabwe has taken many forms ranging from describing former president Robert Mugabe as an angel to the opposition MDC’s “Save chete chete” slogan when referring to its [...]
While ladies of the night put on the right makeup, lashes, musk and dresses to entice clients, their counterparts in the political arena use words, and exaggerated loyalty to charm the mighty and powerful. It [...]
Ruvheneko apologizes for Mawarire furore
Popular radio personality Ruvheneko Parirenyatwa has finally admitted that she invited businessman Tafadzwa Musarara to a ZiFM Stereo programme where he had a showdown with Evan Mawarire. The encounter between Musarara and Mawarire gripped Zimbabwe [...]
VIDEO:’Madzimai’ shows off bedroom skills…
VIDEO:Hakuna munyama wakadai!!!!
grace mugabe Jah Prayzah Mnangagwa ZANU PF zimbabwe
From Hero to Zero…G40’s Sekeramayi stripped off all powers
LATEST:Masvinu dethroned as Mr Ugly as pageant turns ‘uglier’
ZESA Demands $US5 Million back from Chivayo
Mandi Chimeme EXPOSED:wrecks marriage of man 37 years younger than her